Fitantanam-pitondrana · Marsa, 2018 · Global Voices teny Malagasy
Fitantanam-pitondrana · Marsa, 2018
Tantara mikasika ny Fitantanam-pitondrana tamin'ny Marsa, 2018
Mpanao Gazety Vehivavy Miampanga An'ilay Rosiana Mpanao Lalàna Malaza Ho Manao Fanorisorenana Ara-nofo, Tohanan'ny Depiote Namany Anefa Izy
Eoropa Afovoany & Atsinanana 29 Marsa 2018
Mpanao gazety vehivavy telo farafahakeliny no niampanga an'i Leonid Slutsky (tononina hoe Sloo-tski), mpikambana malaza ao amin'ny parlemanta, tamin'ny fanorisorenana ara-nofo. Na izany aza, manohana azy ny ankamaroan'ireo mpiara-miasa aminy ara-politika, misy vehivavy amin'izany.
Fahatsiarovana Ny Andro Nahaterahan'i Neda Tany Iran
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 28 Marsa 2018
...maty voatifitry ny milisy Basij i Neda tamin'ny 20 Jona 2009, nandritra ny fihetsiketsehan'ny olona an'arivony nanohitra ny valim-pifidianana filoham-pirenena Iraniana....
Tsy Mitsahatra Velively Ny Ady Amin'ny Fanamombàna Ao India
Fahasalamàna 27 Marsa 2018
Tamin'ny taona 2013-14, fanamombàna 4 tapitrisa no natao tany India, ka 100.000 monja no natao tamin'ny lehilahy. Zava-dehibe ny mahatsiaro fa mandany 85% amin'ny teti-bolany amin'ny fandrindrana ny fianakaviana amin'ny fanamombàna i India. Tamin'ny taona 2014, vehivavy 15 no maty tao amin'ny fanjakan'i Chhattisgarh noho ny fanamombàna tandrevaka amin'ny tobim-panjakana.
Hosoka , Fandrahonana ary Famoretana : Tsy Hita Tabilao ny Fifidianana ao Repoblika Demaokratikan'i Congo
Afrika Mainty 26 Marsa 2018
Hiankinan'ny ain-dehibe ireo volana ho avy ireo. Hanaja ny tetiandrom-pifidianana napetraka ve i Kabila ?
Tonizia: Fankalazana ny Faha-10 taona Nahafatesan'i Bourguiba
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 24 Marsa 2018
Nahatsiaro ny tsingerintaona faha-10 nahafatesan'ny filoham-pireneny voalohany - Habib Bourguiba ny Toniziana. Mpisolovava Toniziana, mpitondra fanjakana ary mpanorina ny Repoblika Toniziana izy, izay nitondra ny firenena nanomboka ny 25 Jolay 1957 hatramin'ny 7 Novambra 1987.
Mitaky Ny Fialàn'ilay Depiote Naneho Hevitra Manohana Ny Herisetra An-tokantrano Ny Ogandey
Oganda 21 Marsa 2018
“Amin'ny maha lehilahy, mila manitsy ny vadinao ianao," hoy ilay solombavambahoaka Ogandey Onesimus Twinamasiko nandritra ny resadresaka tamin'ny fahitalavitra.
India: Tsy Fitafin'ny Mpampihorohoro Ny Sari
Amerika Avaratra 20 Marsa 2018
Nesorina teo amin'ny tsipi-piarovana ao amin'ny Seranam-piaramanidina Iraisam-pirenen'i Jackson-Evers tany Mississippi, Etazonia ny ambasadaoro Indiana any Etazonia Meera Shankar, ary noteren'ny Fitantanam-Piarovana Ny Fitaterana (Transport Security Administration) (TSA) hanaovana fisavana ny vatany.
Kazakhstan: Miady Hevitra Momba Ny Milina Fikarohana Nasionaly Ny Bilaogera
Azia Afovoany sy Kaokazy 14 Marsa 2018
Nanoratra tao amin'ny bilaoginy, natokana hiresahana momba ny olan'ny fampandrosoana ny Teknolojiam-baovao ilay bilaogera Kazakhstani Nurlan, niresaka momba ilay antsoina hoe "KazNet" mety hanana ny milina fikarohany tsy ho ela izy ary nanonona dokambarotra napetraka tao amin'ny tranonkala ofisialin'ny Sampam-panjakana ho Fampiasana Solosaina sy ny Fifandraisana (AIC).
Azia Atsimo Atsinanana: Ny kiraro, ny kiraro
Azia Atsinanana 10 Marsa 2018
Ho malaza hatrany ho toy ny mpitoraka kiraro ilay mpanao gazety Irakiana Muntadar al-Zaidi. Izy izay nahomby tamin'ny fitorahana kiraro roa teny amin'ny filoha Amerikana George Bush.
Kamerona: Ahiahy Amin'ny Fahalalahana
Afrika Mainty 09 Marsa 2018
Na dia tsy fifantohan-tsain'izao tontolo izao aza i Kamerona, manontany ny tena fisian'ny fahafahana eto amin'ity firenena Afrikana ity ny sasany amin'ireo lahatsoratra bilaogy vao haingana.